Banyere Anyị - Green Camping Products Co., Ltd
Anyị raara onwe anyị nye eru & nchekwa na ngwaahịa. Ma nzukọ chaatị na workflow na-kwadoro site mgbaru ọsọ a. All ndị na ngwaahịa na-nyochara otu otu n'ihu Mbupu. Ọtụtụ n'ime ndị anyị na ngwaahịa na ha agafeela ikwu ule rịọrọ site European ahịa na North America ahịa, gụnyere AZO, CADMIUM, PAHs, òzé, iru, PHTHALATES, FORMALDEHYDE, EN13537, EN71, CPAI-84, CPAI-75, ISO5912.
Anyị bụ ndị mpako nke anyị nnyocha & development, nke-enyere anyị aka na-enye ọtụtụ ihe ọhụrụ dị ka ndị ahịa anyị na-enyere ọtụtụ nke ndị ahịa anyị nwere echiche ha na-emezu.
Onye anyị na-arụ ọrụ na?
Ọma anyị na àgwà ngwaahịa na-ekwesị ntụkwasị obi azụmahịa style akwụ anyị ọtụtụ ahịa, gụnyere Eureka, Nordisk, Red Fox, Obelink, E. Leclerc, Rusta, ALDI, UNHCR, ọdụm mba, Military ngalaba si mba dị iche iche ..., ọ bụrụ na ị na-eche na ọ dị mkpa ka ị, biko egbula kpọtụrụ anyị!